सूचना प्रविधी Archives - itaharinews
काठमाडौं– सञ्चार सेवाको पहुँच सदैव अत्यावश्यक हुन्छ र अझै यस किसिमको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटले विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्थामा सञ्चार सेवा माथि निर्वाध पहुँच झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड १९) ले आफ्नो कार्यस्थल नगई प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरबाटै काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । यस संकटको घडीमा आफ्ना परिवार तथा सा...
काठमाडौं, १४ पुस । सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार प्रतिपक्षीको फरक मतका बाबजुद विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा थुप्रै संकुचित प्रावधान राखिएको भन्दै फरक मत राखेका थिए। समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका ४ सांसद बहादुरसिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, रामबहादुर...
काठमाडौं । सरकारले अनधिकृत रुपमा विदेशी च्यालन प्रसारण गर्ने डिभाइन स्ट्रम नेटवर्क प्रालि ९मेरो टिभी०को लाइसेन्स रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पटक पटकको लिखित तथा मौखिक निर्देशन र एक साताअघिको अन्तिम चेतावनी पनि अटेर गरेपछि कानुन बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अवैध ढंगले डिटिएचबाट च्यानल प्रसारण गरी राज्यलाई करोडौ...
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारसँगै ग्राहकलाई आकर्षक इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले आज सातवटै प्रदेशका ३२ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गर्दै छ । यसअघि फोर जी सेवा काठमाडौं र पोखरामा मात्र थियो । फोर जी सेवा विस्तार भएपछि सेवाग्राहीहरुले साविकको मूल्यमा दोब्बर डाटा पाउने टेलिकमले जनाएको छ । ‘यसअघि नै मोबाइलका उपभोक्ताहरुलाई प्रदान गरिएका केही अल टाइम डाटा अफरमा शत प...
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यौनजन्य अश्लिल सामग्री राख्ने १६ हजारभन्दा बढी वेबसाइटलाई बन्द गराएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तुरुन्त रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले असोज ८ गतेदेखि नै त्यस्ता वेबसाइट बन्द ग...
काठमाडौं । एटीएम अर्थात् (अटोमेटिक टेलर मेसिन) । चाहिएको समयमा पैसा झिक्न मिल्ने भएकाले कतिपयले ‘एनिटाइम मनी’ पनि भन्ने गरेका छन् । पैसा झिक्न सजिलो हुने भएकाले यसको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । तर, धेरैलाई एटीएमको पिन नम्बर मात्र चार अंकको किन हुन्छ ? भन्ने रहस्य थाहा नहोला । सामान्यतया पासवर्ड ६, ८ या त्यो भन्दा बढी अंक या अक्षरको हुने गर्दछ । तर एटीएमको पिन नम्बर अर्थात् पासवर्ड मात्र चार अं...
काठमाडौँ । इन्टरनेट संसार हो । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विश्वभरीका दृश्य, घटना, समाचार तथा जानकारी पाउन सकिन्छ । सदुपयोग गरे इन्टरनेटले ज्ञान दिन्छ तर दुरुपयोग भए अपराध पनि निम्त्याउँछ । यसकारण इन्टरनेटको सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्नु सबैको कामना हुन्छ । तर सबैले इन्टरनेटको सही सदुपयोग गर्छन् भन्ने होइन । इन्टरनेटका दुरुपयोगका कारण हुने घटना वा दुर्घटनाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । ने...
सरकारले अश्लील सामग्रीको प्रकाशनरप्रसारणमा रोक लगायो !
काठमाडौँ । सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको सहज पहुँचले नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको भन्दै त्यस्ता सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता गतिविधिले समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेकाले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाइएको...
एक कल फोन गर्न घण्टौँ हिँडेर अग्लो डाँडामा !
जाजरकोट। यहाँको पश्चिम भेग र उत्तरी पूर्व क्षेत्रमा एक कल फोन गर्नको लागि घण्टौँ हिँडेर अग्लो डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका र जुनिचाँदे गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिकाका स्थानीय फोन गर्न अग्लो डाँडाको साहारा लिन बाध्य भएको स्थानीय रेशमबहादुर खड्काले बताए । अहिले भएका नेपाल टेलिकमका टावरले घाम लागेपछि मात्र काम गर्ने हुँदा अग्लो डाँडामा पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छेडागा...
काठमाडौं । मोबाईलकै कारण किशोर किशोरीहरुले बाल विवाह गर्न थालेपछि समाजि अभियन्तहरु कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले अब माध्यमिक तह कक्षा १२ पास नगेरेसम्म मोबाईल बोक्न नपाउनु पर्ने कानुन निमार्ण हुन जरुरी रहेको भन्दै कडा रुपमा आफ्नो धारण प्रस्तुत गरेका हुन् । बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सामाजिक संघसस्थाले आधारभूत तहदेखि नै किशोरकिशोरीको हातहातमा मोबाइल हुने भएकाले सञ्चारको दूरुपयो...